Apple Inoburitsa Beta 6 yeIOS 10.3.3 Vagadziri | IPhone nhau
Apple inoburitsa beta 6 yevagadziri veIOS 10.3.3
Masikati ano asarudzwa neApple kuvhurwa kwe 10.3.3th beta vhezheni yeIOS XNUMX yevagadziri. Mune ino kesi, pamusoro peiyo beta vhezheni yeIOS 10.3.3, kambani yakaburitsa beta vhezheni vatanhatu yeMacOS Sierra 10.12.6 yevagadziri asi hapana kana chiratidzo cheveruzhinji beta vhezheni parizvino.
Kune rimwe divi, zvakakosha kuti uzive kuti hapana shanduro kune mamwe masisitimu, saka tvOS uye watchOS parizvino zviri kunze kweshanduro nyowani yevanogadzira. Izvi zvinogona kuchinja munguva pfupi uye vanogona kuvhura idzi shanduro mumaawa mashoma kana kumirira mangwana.
Chero zvazvingaitika, chii chinowedzerwa mune idzi nyowani beta vhezheni yevagadziri veese masystem, ndiwo zvakajairika kuita kwekuvandudza, kugadzikana kwesystem, uye kugadzirisa bug. Hazviratidzike sekuti isu tine nhau mune idzi nyowani beta asi kana paine aripo tichaiwedzera zvakananga muchinyorwa chino.
Pane zvishoma kuruboshwe kuti uone iyo yepamutemo vhezheni yeIOS 10.3.3 uye isu tiri mubeta 6, saka isu tinofungidzira kuti Apple haizotora nguva yakareba kuti itange yekupedzisira vhezheni iyi vhezheni. Parizvino, izvo zvinofanirwa kuitwa nevagadziri ndeizvi fananidza zvakanyanya kubva mune idzi beta vhezheni kuitira kuti pavanotangwa zviri pamutemo kumamirioni evashandisi havana matambudziko erudzi chero rupi zvaro. Ichokwadi kuti iyo nyeredzi vhezheni yenguva ino hapana mubvunzo kuti iOS 11 uye nhau dzainowedzera, asi isu hatidi kusvetuka matanho uye kutanga inguva yekumisikidza zviri pamutemo kune iOS 10.3.3 uye wosvetukira kuIOS 11.
[YAKADZIDZWA] Iyo iOS 10.3.3 yeruzhinji beta inowanikwawo kune avo vanoda kuiisa pamidziyo yavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Apple inoburitsa beta 6 yevagadziri veIOS 10.3.3
Hurumende yeUnited States Inodzivirira Apple Mumatare Ekutiza Mutero
Bvisa mabhaluni kubva kune maapps kana uchiverenga zviziviso nePigeon (tweak)